inona ny fihodinan'ny cnc? | PTJ hardware inc.
INONA NO MITONDRA NY CNC?
Ny CNC Turning Machining dia fomba fanodinana teknolojia avo lenta ho an'ny ampahany metaly.
Afaka manamboatra karazana fitaovana isan-karazany, ao anatin'izany ny vy tsy mitongilana 316, 304, vy vy, vy vita amin'ny firaka, aliminioma firaka, firaka zinc, firaka titanium, varahina, vy, plastika, akrilika, POM, UHWM ary akora hafa, dia azo zahana ho efa-joro , boribory mitambatra Ampahany amin'ny firafitra sarotra.
Ny milina Lathe dia ampahany amin'ny famolavolana ary misy karazany roa ny milina:
1. Amboary ny fitaovana fihodinana ary alaharo ny fihodinam-bokatra tsy miova amin'ny fihodinana
2, ny workpiece dia raikitra, amin'ny alàlan'ny fihodinan'ny haingam-pandeha, ny fivezivezena marindrano sy mijidina amin'ny fitaovana mihodina (mpitazona fitaovana) ho an'ny milina marina.
Machining manodina serivisy metaly(aliminioma ▲)
PTJ no fivarotana tokan-tokan-trano anao ho an'ny fikotranan'i CNC Turning Services & Surface.
Manolotra teny nalaina avy hatrany, fahaiza-manao lehibe, vidiny lafo ary kalitao azo antoka izahay..
Mihodina varingarina / vy vy (vy▲)
Ny lathes dia ampiasaina indrindra amin'ny alàlan'ny masinina, kapila, tanany ary sangan'asa hafa misy faritra mihodina.
Izy ireo no karazan'asan'ny milina be mpampiasa indrindra amin'ny famokarana milina sy fanamboarana zavamaniry..
PTJ Hardware dia manolotra serivisy fihodinana CNC haingana sy marina. Ny departemantanay mihodina CNC manokana dia misy lathes CNC izay manara-penitra. Miaraka amin'ireo masinista efa za-draharaha amintsika dia afaka manomana na dia ny asa famadihana sarotra indrindra aza izahay.
Betsaka ny mpanjifanay no manome ny sarin'izy ireo manokana, fa raha tsy manana ny anao ianao dia azonay atao ny mandray ny hevitray ary mamadika azy ireo ho ampahany mampiasa ny fahaizanay CAD / CAM ao an-trano.
Maninona no mifidy serivisy fihodinana PTJ CNCs?
famokarana - Afaka manamboatra ampahany amin'ny metaly, alloys ary plastika marobe izahay, hahazoana antoka fa azonao atao ny manamboatra ny singao avy amin'ny fitaovana mety indrindra ho an'ny fampiharana kasaina.
Fahaiza-manao CAD / CAM- Manatanteraka dingana faharoa any an-trano izahay ary afaka mitantana ireo fizotran'ny asa any ivelany izay ataon'ireo magazay hafa, manamora ny fizotran'ny fahazoana ampahany ho anao ary manampy amin'ny fanomezana anao ampahany feno.
javatra iray -Ny lathes ao an-trano dia afaka manodina ny ampahany hatramin'ny 30 "amin'ny savaivony. Na manao ahoana na manao ahoana ny habeny sy ny fahasarotan'ny tetik'asa fihodinanao CNC, PTJ dia manana talenta sy haitao ao an-trano hanomezana fahafaham-bidy ny filanao mihodina amin'ny CNC..
FAMPIANARANA FIVORIANA AMIN'NY TOHANA
Mifandraisa aminay anio raha te hahalala bebe kokoa momba ny serivisy fihodinan'ny PTJ Hardware an'ny CNC.
● Cnc fitaovana elektronika